Waad Qalad Ku Samaynaysaa! | Martech Zone
Waad Qalad Ku Samaynaysaa!
Arbacada, Agoosto 19, 2009 Axad, Abriil 24, 2016 Chris Lucas
Ka ganacsade ahaan waxaan si buuxda uga wada warqabnaa sida ay u adag tahay in wax laga beddelo habdhaqanka dadka. Waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu adag ee aad isku dayi karto inaad sameyso. Waa sababta Google, ay hadda, ugu raaxeysaneyso sii wadida guusha raadinta, maxaa yeelay dadku waxay caadaysteen "Google it" markay u baahan yihiin inay wax ka raadsadaan shabakadda.
Aniga oo taas og, waxaan aad ula yaabay tirada dadka aan ku arko Twitter-ka iyo baloogyada dadka kale u sheegaya inay u adeegsanayaan Baraha Bulshada khalad. Waxa aan aad u sii jeclahay ayaa ah in kuwani ay yihiin dadka ama ka shaqeeya la taliyeyaal ama wakaalado, ha ahaadaan PR, Suuq geyn, ama Baraha Bulshada.
Ma dooneysaa sir ku saabsan sida loo hormariyo Baraha Bulshada isla markaana looga caawiyo shirkadaha inay ganacsigooda ku kobciyaan khadka tooska ah? Jooji inaad dadka u sheegto inay qalad sameynayaan iyo bilaabaan inaad dadka u sheegto sida ay sida ugu fiican u qaban karaan. Qofna ma doonayo in loo sheego inay khaldan yihiin, waxay rabaan inay ogaadaan sida loo horumarin karo ganacsigooda. Waa hab fudud oo lagu kobciyo meheraddaada oo aad u aragto in si fiican loo korsado dhaqannada warbaahinta bulshada ee heerka shirkadaha.
Kulligeen waxaan baraneynaa sida loo adeegsado qalabkan, dadka loo xoojiyo oo aan u fiirsano meheraddaadu markay kacayso.
Tags: khaldanxeerarkaxeerarka warbaahinta bulshadakhaladqalad ayaad sameyneysaa
25 Talaabooyinka Guusha: Ka Hortagga Mashiinka Raadinta iyo Blogging Business
Brody PR: Goormaad DABAYSaa Xiriirkaaga Dadweynaha
Agoosto 19, 2009 saacaddu markay ahayd 4:06 PM
Waan ku raacsanahay .. Waxaan sameeyay qoraal dhawaan aan cinwaan uga dhigay "Baraha Bulshada Waxaan u baahanahay macalin?" Waxaan arkayaa inbadan iyo milkiileyaal ganacsi oo fekeraya ama bilaabaya inay ku dhexjiraan baraha bulshada laakiin waxaan u arkaa in wax yar ka jaraan. Qaarkood waa bilaa aqoon halka kuwa kalena hoos u dhigayaan awoodda warbaahinta bulshada. Kuwo badan "KHAYRADAYAASHA" waxay ku andacoonayaan inay khabiir ku yihiin ama natiijooyin rajo leh oo iyaga laftoodu aysan gaarin. Iyadoo aqoon la'aan iyo waqti wax lagu barto, milkiilayaasha meheradaha si fudud ayaa loo iibinayaa. Waan la socdaa waana ixtiraama kuwa ku jira baraha bulshada sida haddii aan iyaga u raadinayay la taliye xagga dhaqaalaha ah. Haddii la-taliyaha maaliyaddu aanu weli isu aasaasin dhaqaale, sidee bay aniga ila tashanayaan.
Waan ku qanacsanahay wixii jawaab celin ah ee ku saabsan bloggeyga http://yougonetwork.com/johnnie_firari/2009/08/soWax anigoo ah milkiile meherad yar ayaan wali qaabeynayaa oo ka shaqeynayaa inaan ballanqaado. Mahadsanid.